Tababare Solskjaer oo hadal cajiib ah ka dhawaajiyay kadib markii uu ku guuleystay abaal-marinta tababarihii ugu fiicnaa Premier League bishii lasoo dhaafay – Gool FM
(Manchester) 08 Feb 2019. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa rabooday inuu sawiro la qaato taageerayaashiisa kadib markii loo caleemo saaray abaalmarinta “Macalinka bisha” ee horyaalka Premier League.
Tababare Solskjaer ayaa sidoo kale rabooday inuu kaga mahad celiyo saaxiibadiisa dhanka farsamada ee kooxda, kadib dadaalkii xooganaa ay kula bixiyeen sida ay ku wanaajin lahaayeen kooxda sida ugu dhaqsida badan uguna macquulsan, taasoo sababtay inuu ku guuleysto abaal marinta macallinkii ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii la soo dhaafay ee Janaayo.
Macalinka reer Norway ayaa 9 guul ku hogaamiyey kooxda Manchester United 10 kulan oo uu leyliyey, halka kulanka kalena uu barbaro la galay tan iyo markii uu xilka kala wareegay Jose Mourinho.
Manchester United ayaa haatan sare kaga soo kaxday booska 6-aad uu kaga tagay macalinkoodii hore ee Jose Mourinho, waxay fadhiyaan booska 5-aad, iyaga oo 2 dhibcood u jira Chelsea oo ku jirta booska 4-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League.
Hadaba tababare Solskjaer ayaa wuxuu wareysi ku bixiyay shabakada rasmiga ah ee kooxda Manchester United wuxuu ku sheegay:
“Ma noqon kartid tababare fiican hadii aadan heysan ciyaartoy aad u wanaagsan, waxay ahaayeen kuwo cajiib ah waqtiyadii lasoo dhaafay oo dhan”.
Waxaa xusid mudan in sidoo kale goolkii ugu fiicnaa bishii lasoo dhaafay ee Janaayo uu dhaliyay laacibka Fulham ee André Schürrle, kadib goolkiisii cajiibka ahaa uu ka dhaliyay kulankii Burnley.